Hafatra mampiakatra ny hafatry ny Minisitry ny Seychelles amin'ny Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Hafatra mampiakatra ny hafatry ny Minisitry ny Seychelles amin'ny Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • fivoriana • Vaovao • People • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Minisitry ny Seychelles amin'ny Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany
Amin'ity andro ity isan-taona dia manatevin-daharana mpikambana miisa 158 hafa ao amin'ny World Tourism Organization (UNWTO) i Seychelles amin'ny fahatsiarovana ny Andro Iraisam-pirenena momba ny fizahantany. Ity andro ity dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ary koa ho andro fankalazana sy fandinihana. Eo ambanin'ny lohahevitra «Manamboatra ny hoavintsika», dia mankasitraka ny firenentsika sy ny fandraisan'izy ireo anjara.
Ny Seychellois rehetra, ny sehatry ny asa ara-toekarena rehetra ao amin'ny firenena dia tokony hiditra amin'ny dingan'ny fitomboana.
Noho ny COVID-19, toy ireo firenena hafa rehetra eto ambonin'ny planeta, Seychelles dia nifanehitra tamin'ny firodanan'ny asa fizahan-tany.
Tonga saina haingana ny firenena fa ny fanarahana ny toe-javatra miova no lakilen'ny fahavelomany.
UNWTO dia nanendry ny Andro Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany 2021 ho andro iray hifantohana amin'ny fizahan-tany ho an'ny fitomboana. Ny fitomboana iraisana no tadiavintsika eo am-pitadiavana ny fahasitranana amin'ny fiantraikan'ny areti-mifindra. Ary ny fizahan-tany no hitarika azy. Mikasika ny tsirairay amintsika io, ary ny Seychellois rehetra, ny sehatry ny asa toekarena rehetra eto amin'ny firenentsika dia tokony hiditra amin'ity fomba ity. Indrindra amin'ity "vaovao vaovao" ity.
Manoloana ny firodanan'ny orinasantsika akaiky dia nahatsapa izahay fa ny fanarahana ny toe-javatra miova no lakilen'ny fivelomanay. Nanao risika goavambe izahay nefa nanao kajy, nampifandray ny fanarenana ara-toekarena sy ny fiarovana ny fahasalamana sy fiarovana ny olotsika sy ny vahininay tamin'ny alàlan'ny fanombohana tamin'ny 2021 ny programa fanaovana vaksiny mahery vaika sy mahery vaika manohitra ny COVID-19, ahafahanay misokatra amin-kasahiana. izao tontolo izao amin'ny volana martsa. Izahay izao dia mioty ny dividends an'ireo fepetra noraisintsika ireo.
Saingy tokony tsy tokony ho afa-po isika, ary tsy afaka. Tsy irery isika amin'ny fampifanarahana ny ara-dalàna vaovao. Ireo mpifaninana aminay dia mahery setra sy manavao ihany koa amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fizahantany fizahan-tany. Manoloana ny fifaninanana masiaka sy tsy miato dia tsy maintsy manohy manome lanja vola isika. Tsy maintsy ataontsika antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra ny toeram-ponenana sy serivisy atolotray, ary mbola ambony noho izay ekena sy antenaina aza. Tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fanolorana mari-pahaizana lehibe kokoa momba ny fizahan-tany fizahan-tany marina sy miankina amin'ny fiaraha-monina misy taratry ny marika izahay. Ary koa, ary tsy latsa-danja amin'izany, tsy maintsy manohy mamono ny fanao tsy ara-dalàna sy tsy misy dikany izay manimba isika ny indostrian'ny fizahantany sy fandraisam-bahiny, ary manala baraka ny sarinay.
Amin'ity Andro manerantany fizahan-tany ity dia miantso ny firaisankina sy ny firaisankina eo amin'ny sehatry ny fizahantany aho. Satria, mihoatra ny statistika, fantatray fa ao ambadiky ny tarehimarika tsirairay momba ity indostria ity dia misy ny mpandraharaha, misy ny vehivavy sy ny lehilahy. Ka hampisondrotra ny indostrian'ny fizahantsika ho amin'ny fenitra avo lenta kokoa ary handresy ireo fanamby ho avy, tsy tokony hanilikilika na iza na iza isika dia tsy maintsy manambatra hery. Amin'ny alàlan'ny fizarana fahitana mitovy sy faniriana mitovy amin'izany jereo miroborobo ny fizahan-tany, amin'ny fiaraha-miasa manokana, dia hiseho ho mpandresy isika. Tsy misy fisalasalana kely.
Faly be izahay noho ny fanoloran-tenanao sy ny fitiavanao, misaotra anao izahay nametraka ny fonao tao amin'ny indostrian'ny fizahantany.
Mankalaza anao izahay anio. Tratry ny Andro fitsangatsanganana eran-tany!